Dowlada Soomaaliya oo ku dadaalaysa soo jiidashada maalgashiga hormarinta. – The Voice of Northeastern Kenya
Dowlada Soomaaliya oo ku dadaalaysa soo jiidashada maalgashiga hormarinta.
Waxaa shalay si rasmi ah magaalada Beijing ee dalka shiinaha uga furmay Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika oo ay isug yimaadeen hogaamiyeyaasha Africa,shiinaha iyo Qaramada Midowbay.
Waddanka Shiinaha, oo ka duulaya xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo xiriirka Shiinaha iyo Afrika ayaa ku dhawaaqay Sanduuq horumarineed oo $60 bilyan ah kaasoo Afrika lagu hormarinayo,waxaana lagu wadaa in la fuliyo sadexda sano ee soo socota.
Inta badan hindisayaasha horumarka ee sanduuqan ayaa waxaa lagu salaynayaa mashaariicda qaybta ka ah Hindisaha Kaabayaasha Dhaqaale.
Qaybta horumarinta loogu talagalay ee sanduuqan waxaa kamid ah hindisayaasha isgaarsiinta, kaabayaasha dhaqaalaha, tamarta, dekadaha iyo tabobarrada kala duwan.
Soomaaliya waxa ay sidoo kale saxiixday heshiis la xiriira sare u qaadidda Iskaashiga Dhaqaale iyo Farsamo ee u dhexeeya Beijing iyo Muqdisho .
Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa wadahadalladii ay yeesheen ka hor Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika, waxaay isla garteen in la xoojiyo xiriirrada dhaqaale iyo in la iska kaashado hindisayaasha horumarka.
Dowlada Soomaaliya waxaay dadaal badan ku bixinaysaa helidda maalgelin horumarineed iyo maalgashi shisheeye si ay u gaarto yoolalka horumarka, ugana faa’iideysato halka ay kaga taallo Geeska Afrika oo ah meel Istiraatiiji ah.
← Doorashada kursi ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb.
Voting begins in Pakistan’s presidential election →